Taageer Xildhibaanka u sharxan Golaha Deegaanka ee Milton Keynes
Axad 26 August 2012 SMC
(Candidate of Councillor for Fishermead Campbel Park – Milton Keynes)
Qalinkii Abdirahman Abdulahi (Abdi yare)
Candidate Coucillor Mr. Adan Jama Kahin
Waxa dadka Somalida ah ee degan magaalada Milton Keynes, UK, loo sheegaya in ninkii ugu horeyay Somalida halkan degan uu ka qaybgalay tartanka doorashada ee golaha deeganka (Councillor for Campbell park, Milton Keynes). Hadaba ninkaasoo oo layidha Adan Jama Kahin, bal horta waxan jeclahay inaan idinka siiyo warbixin kooban intiina aan garanayn taasoo ku saabsan aqoontiisa, khibradiisa iyo waxa uu bulshada Somalida ah u qabtay. Dhinaca aqoonta Murashaxu wuxu ka diyaariayay Shahaadada labaad ee Jaamicadeed loona yaqaan Masterka taasoo uu ku dhamaystay cilmiga maaraynta ganacsiga iyo suuq gaynta Jaamacada layidha Bedfordshire University oo ku taala dalkan Britain. Sidoo kale Hore waxa uu ugu diyaariay isla heerka (Posgraduate) oo iyana ah aqoonta sare Jaamacad ku taala dalka Norway oo loo yaqaan (Norwegian School of Management), waxanu imikana ka diyaariya waxbarasho ku saabsan cilmiga bulshada Jamacada la yidha (Open University). Wuxu hore u ahaan jiray Mulkiile iyo Maamule Ganacsi intii aanu ka soo guurin dalka Norway. Markii uu dalkan Ingriiska u soo wareegayna waxa uu ka kala shaqeyay shirkada kala duwan, wakhtigan xaadirka ahna wuxu ka shaqeeya shirkad ku taala magaaladan Milton Keynes. Hadaba Adan waa nin aad ugu firfircoon waxqabadka iyo adeega bulshada , dhinaca hay'da samafalka ah waxa uu hore uga shaqeeyay (Norwegian Red Cross) mudo sanad ah , waxa kale uu ka soo shaqeeyay Haa'yada layidha (world Vision) xarunteeda Europe eek u taala magaaladan Milton Keynes, UK. Inta marka laga yimaado, haddii aan dheehano hawlaha uu u qabto bulshada. Waxa uu yahay imika MADAXA SOMALIDA ku nool Milton Keynes kuwaas ah qaar ka kala yimi mandaqadaha geeska Afrika. Hadaba intuu uu xilka hayay oo ahayd ila dhawr sanadood, Adan wuxu ahaa qof u dhex ah dadka halkan degan oo dhan. Wuxu uu xidhiidh fiican la sameyey Jaaliyadaha kale sida Srilanka, Zimbabwe, Ghana iyo Carabtaba si ay isaga kaashadan qadiyadooda u gaar ka ah, kuwaasoo iyaguna balanqaaday taageeradooda doorashan imika.
Wuxu murashaxu dadka Somalida ah iyo waliba Ajaanibka u qabtay halkan kuma soo koobi, karo waxanse ka xasuusta, shirar aanu dhawr jeer dawlada la yeelanay inuu Adan oo marwalba shirarka Gudomiye ka aha wuxuna dawlada ku cadaadiyay in dawlada hoose caruurta somalida ka caawiso dhinaca waxbarashada galinka danbe oo lacag la'an ah. In caruurta meelah galabti ama makhribkii wareega loo furo meelo dhalinyaradu ku ciyaaraan (youth club), kuwaasoo uu uga dhaadhiciyay inay taasi yarayndoonto caruurta iskuulada ka hadha. Nasiib wanaag labadiiba maanta waanu ku guulaysanay oo Sabti walba caruurtu waxay helaan macalimiin tayo leh oo caawiya. Dhinaca kalana waxa na siiyay Xaggan meel ay loogu talagalay in caruurtu ciyaaraha fudu ku ciyaaraan wiigiiba ila 2 jeer. Arrimahaasoo ay sii xoojiyeen Barigii ay dhalinyaradu somalidu halkan isku dileen oo Adan uu arrinta sidii looga hortegi laha uu aad ugag hadlaay shirar uu ka qaybgalay iyo waraysiyo uu siiyay Radio BBC iyo Telefisionkaba. Inta kuma eekaan wuxu toos ula shaqeeya Madaxii hore ee Liberal Democratic Party Mrs. Isobel Mccal iyo madaxa qaybta gaadiidka ee Golaha Deegan Milton Keynes iyo Mr. John Ghoss oo ah xisbiga Labourka (shaqaalaha). Sidoo, kale waxay aad isugu dhaw yihiin oo ay si joogta ah u wada shaqeeyan Member of Parliament Milton Keynes Mr. Larcaster, kaasoo ay isna ka wada ololeeyan siddii maandooriyaha Qaadka loogu joojinlaha cariga Ingriiska iyo arrimaha keleba. Waxa xusid mudan in MPgu ama ninka ka tirsan Parliamanka UK uu dhawr jeer Jariidka magaaladan ku soo qoray murashaxan waxqabadkiisa isagoo kaga hadlaaya qoraaladiisa ku saabaxay Jaraaiid. Waxa kale uu Adan ka yahay xubin firfircoon ururka loo yaqaan ururka somalida ah ee la dagaalanka Qaadka UK ee, kaasoo uu Madaxda ka yahay Abukar Cawaale, halkaana Adan muddo ka hor waxa loogu magacaabay Gudomiye Ku xigeen uruka la dagaalanka Qaadka. Waxa uu uu taga GYM si uu ugu jimicsado waqtiyada uu firaaqada yahay, Waxa kale uu jecelyahay wax aqriska, isla markaan wax qoro. Murashaxu runtii waa nin qoraa ah, oo aad wax uga qora arrimaha bushada. Waxa aad keheli doonta qoraaladiisa Jariidka iyo webyad badan oo Somaliya iyo Agenabib ah, waxana uu joogta wax ugu qora Jariirada maalinlaha ah ee ka soo baxda Hargiesa lana yidha Saxafi Newspaper iyo websiyad badan.
Gabagabadii, waxan hadalkaygii kusoo gabagabaynaya waxan ilahay uga rajaynaya in uu Adan ku guulaysto jagadaasi iyada ah, taasoo bulshaduna ay aad uga wada faaiididoonan. Hadaba sidan la socodo wuxu murashaxu gudbiyay arjigiisi bishan August 23 keedi , waxana warqad uu maanta ka helay dawlada hoose ka heay loo sheegay in uu qaybtii hore ka gudbay , kadib markii ay codsigiisi kaasoo ay soo gudbiyaan laba nin oo Councillora ah iyo waliba isagoo ka haysta ogolaansho Xafiiska Xildhibaanka Parliamanka UK, (MP office). Waxany doorashada kama danbaynta ahi dhici doonta Maalinta Khamiista ah ee 20 ka Bisha September 2012. Inkasto uu marashaxu aad ugu kalsoonyahay inuu jagada heli doono hadana guulbaanu rajaynayna.
Abdirahaman Abdulahi (Abdi Yare)
Madaxa ololaha doorashada iyo
Xooghaya Somalida Milton Keynes. U